Otu esi etinye GIMP na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 31, 2021 October 19, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1. Wụnye GIMP na APT Manager
Nhọrọ 2. Wụnye GIMP na Snap (Snapcraft)
Nhọrọ 3. Wụnye GIMP na Flatpak
Otu esi ebido GIMP
GIMP bụ n'efu, ngwanrọ na-edezi eserese raster mepere emepe nke a na-ejikarị eme ihe maka nhazi onyonyo na ndezi onyonyo, ntụgharị n'etiti ụdị onyonyo dị iche iche, ịse ụdị n'efu, yana ọtụtụ ọrụ pụrụ iche. A tọhapụrụ GIMP n'okpuru ikike GPL-3.0-ma ọ bụ emechaa ma dị maka Linux, macOS na Microsoft Windows.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta wụnye ngwa GIMP na Debian 11 Bullseye site na iji ụzọ atọ ọzọ ị nwere ike họrọ na.
Ndị njikwa nwụnye nhọrọ - Snap ma ọ bụ Flatpak
Ozugbo etinyere ya, kwado nrụnye ahụ site na ịlele apt-cache policy na GIMP.
sudo apt-cache policy gimp
N'ọdịnihu, a na-edozi mmelite site na iji apt update && apt nweta nkwalite iwu, n'otu n'otu.
Iji wepu GIMP mgbe etinyere ya site na iji njikwa ngwugwu APT, jiri iwu a.
sudo apt autoremove gimp --purge -y
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na mwepụ.
Mara na nke a ga-ewepụ GIMP kpamkpam na sistemụ gị yana GIMP dabere na etinyere n'oge nrụnye mbụ.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Ndị ọrụ Debian nwere ike mara Snap ka ọ na-emepụta ma na-elekọta ya site na Ubuntu; Agbanyeghị, etinyeghị ya na sistemụ gị. Agbanyeghị, enwere ike itinye nke a ngwa ngwa.
Ọzọ, tinye ngwungwu GIMP site na iji snap:
Dịka n'elu, nke a na-agwa gị na etinyere GIMP nke ọma yana nọmba ụdị.
Ọ bụrụ na ịchọkwaghị itinye GIMP, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Ugbu a tinye SNAP site na iji iwu flatpak a:
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ụdị Flatpack nke GIMP, gbaa iwu a:
sudo flatpak uninstall --delete-data flathub org.gimp.GIMP
Ugbu a ị nwere onye ahịa GIMP arụnyere, enwere ike ịme mmalite n'ụzọ abụọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite GIMP wee jiri ọdụ, ziga ya na ndabere:
N'ikpeazụ, ndị ọrụ Flatpak nwere ike ịgba ọsọ site na njedebe site na iji iwu a.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi ngwa> Mmemme njikwa onyonyo GNU. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ozugbo imepere GIMP, ị ga-ahụ ihuenyo mbudata nke mbụ.
Ekele, ị rụnyela GIMP nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ngwa GIMP gọọmentị na desktọpụ Debian 11 Bullseye gị n'ụzọ abụọ dị iche iche.
N'ozuzu, GIMP na-eguzo n'elu ọtụtụ ngwa ndị ọzọ nke ọdịdị ya ka ọ na-enye nnukwu ọrụ nhazi nke na-eme ka ọ dịrị ndị mbido mfe ịmalite na ngwa ahụ. GIMP nwekwara UI dị mfe ịhazi nke nwere ike inye aka mee ka usoro ọrụ dịkwuo elu na foto dijitalụ n'ịntanetị. Okwesiri ile anya.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Gimp Mail igodo
Otu esi etinye asụsụ mmemme R na Ubuntu 20.04